China usayizi ohlukahlukene wemboni ye-nylon washer kanye nabaphakeli | I-H & F.nylon
I gama le-brand HF
Ubuhle be-nylon washer
Uma kuqhathaniswa nama-washer ensimbi, anokufakwa okuhle kakhulu, ukumelana nokugqwala, ukufudumeza okushisayo nezinto ezingekho kazibuthe, futhi alula, okwenza ukuthi asetshenziswe kabanzi emikhakheni ehlukahlukene kufaka phakathi ama-semiconductors, ezezimoto, imboni ye-aerospace nokuhlobisa kwangaphakathi. Inani lezinto ezisetshenzisiwe libuye lifike ezinhlotsheni eziyishumi zezinto zokwakha, kufaka phakathi i-PA66, i-PC, i-PEEK ekhethekile yobunjiniyela ngokusebenza okuhle kakhulu, okuqiniswe ngengilazi ye-fiber RENY ne-PPS, i-fluorine resin PTFE, i-PFA ne-PVD.
Inayoni iyawashwa yenziwa ngenqubo yokubumba umjovo, le ndlela yokubumba iyefana nenqubo yokusetshenziswa kwamasirinji, umzimba wesirinji umshini wokubumba umjovo, uketshezi lomjovo luyoncibilika izinto zokusetshenziswa zepulasitiki, nengcindezi yomunwe kusirinji nayi ingcindezi yokubacindezela, ukusetshenziswa kwengcindezi yomjovo ukuze izinto zokusetshenziswa ngembobo encane ebizwa ngokuthi "umnyango" ungene esikhunjeni ngemuva komgodi! Izici eziyinhloko yilezi: ukukhiqizwa ngobuningi kwekhwalithi efanayo esikhathini esifushane; ukuqedela okuzenzakalelayo kusuka ekondleni izinto zokusetshenziswa ukukhipha imikhiqizo ebunjiwe; kanye nekhono lokukhiqiza imikhiqizo ebunjiwe ngokunemba okuphezulu nobukhulu besakhiwo. Izici eziyinhloko yilezi: ikhono lokukhiqiza inqwaba yemikhiqizo ebunjiwe yekhwalithi efanayo esikhathini esifushane; ukuzenzekelayo okuphelele kwenqubo kusuka ekufakweni kwezinto zokusetshenziswa ekususweni kwemikhiqizo ebunjiwe; kanye nekhono lokukhiqiza imikhiqizo ebunjiwe ngokunemba okuphezulu kwezinhlaka kanye nezakhiwo eziyinkimbinkimbi. Ngakolunye uhlangothi, ukutshalwa kwemali kwimishini kukhulu, futhi izindleko zesikhunta ziyabiza. Uma kucatshangelwa ukwehla kwesikhunta, kungashiwo ukuthi le ndlela ayifanele ukukhiqizwa kweqoqo elincane.
Langaphambilini Inayiloni cliver pulley ngentengo engcono kakhulu
Imishini Yokugeza Inayiloni Emnyama
Inayiloni Flat Washers
Inayila Yamahlombe Enayiloni
Inayiloni Top Hat Washer
Inayiloni Washa Spacers